‘नेताको मन पनि गैंडाको छाला जस्तौ भइसक्यो–कुनै गालिले छेडिदैन’ – नेपाली सूर्य
March 5, 2019 March 5, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on ‘नेताको मन पनि गैंडाको छाला जस्तौ भइसक्यो–कुनै गालिले छेडिदैन’
नेपाली राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ । लामो इतिहास बोकेका राजनीतिक दलसँग स्थापनाकालका संस्थापक नेताहरुको नाम र फोटो टाँस्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । नयाँ उदाएका दलहरु भित्र २ जना ४ जना बाहेक चिनिने अनुहार छैनन् ।
त्यसमाथि अधिकांश हामी नेपालीहरु हजुरबाले कांग्रेस बनाएर कांग्रेस र हजुरबा कम्युनिष्ट भएर कम्युनिष्ट छाँै । मधेशवादी दलहरुमा पनि त्यस्तै हो, थरीथरीका राप्रपामा पनि त्यस्तै हो । जनता–जनता नभएर कार्यकर्ता जस्ता भए भने नेता सुध्रिदैनन् । त्यसैले आज नेता केन्द्रीत भन्दा बढी जनता केन्द्रीत सीधाकुरा गरौं ।
एकै पटक सिंगै देश नै बनिहाल्छ भन्ने भ्रमबाट चाँही सबै जना मुक्भ हुनैपर्छ । सिंगो देश विकशित हेर्न चाहनेले आफ्नो टोलको हालत हेरेको छ ? आफ्नो स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाई भेटेको छ ? बाटोमा पानीको पाइप फुटेको वर्ष दिन भयो । प्रत्येक दिन खाल्डो छल्यो हिड्यो ।
चिया गफ वा रोमरस गफमा सीधै सरकारलाई वा प्रधानमन्त्रीलाई जाने जति गाली ग¥यो । कयाँै काम नलाग्ने नम्बर फोनमा छन् तर नभई नहुने वडा कार्यालय वा वडा अध्यक्षको नम्बर धेरैसँग छैन । छ त ? आँफू बसेको टोल भित्रका समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्ने बानी नपरुञ्जेल सुधार आउँदैन । खाली जन्म, विवाह, मृत्यु दर्ताको सिफारिस, चारकिल्ला सिफारिस जस्ता काम परे मात्र वडामा जाने नत्र वडा कार्यालयलाई मतलब नै नगर्ने हो भने वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई के मतलब र तपाईको ।
सिफारिस दियो, बजेट अनुसारको काम ग¥यो बस्यो । तपाईले गुनासो गरे पनि नगरेपनि उहाँहरुको तलब प्रत्येक महीनाको १ गते आउँछ नै आउँछ । एकै पटक सिंगै र सीधै देश विकास हुँदै हुँदैन, तपाईले र मैले फोक्सो फुटुन्जेल गाली गरे पनि यो सम्भव नै छैन । मुलुकको चिन्ता पछि लिउ, पहिले आँफू बस्ने टोलको चिन्ता लिउन हुन्न ?
हामी जनता पनि सरकार जस्तै छौँ, बर्खा लागेपछि बाटो पिच गर्ने । हिजो चुनाव हुँदा के–के गर्छु भनेका थिए । त्यो कुरा उनले अर्को चुनाव नआउन्जेल नसम्झेलान तर तपाई हामीले बिर्सन भएन । आफ्नो वडाको बजेट कति हो ।
प्राथमिकता के के हुन ? अहिलेसम्म कति खर्च भयो ? त्यसको हिसाब कहाँ हेर्न पाइन्छ, यो एक बर्षमा के–के प्रगति भयो । अर्को बर्षसम्म के–के कुरा सम्पन्न हुन्छन् वा के–के योजना र काम हुने छन् । यसको जानकारी लिन आवश्यक छ ।
ह्या… कसले गर्छ यो झण्झट भन्नु भो भने वा सोच्नु भो भने मान्नुस तपाईलाई परिर्वतन चाहिएकै छैन । जे छ एक दम पर्फेक्ट छ । धुलो उड्छ, मुख थुन्नुहोस्, फोहरको डंगुर छ गनाउँछ नाक थुन्नुस्, हिलो छ नाघेर हिड्नुस्, कुल्चेर हिड्नुस्, चिप्लीनुस्, पछारीनुस् ।
सम्झनुहोस त हिलो, धुलो, मैलो, फोहोर, टाइममा बस नआउँदा, ट्याक्सीले मिटरमा नलादाँ, पानी विजुली नआउँदा, टाइममा काम नहुँदा तपाई हामीले कति सीधै यो देशैलाई गाली गरेका छाँै । सायद शिर्षक–शिर्षकमा सयाँै पटक । तर हामी मध्ये कतिले आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर वा भेटेर समस्या कहिले समाधान हुन्छ भनेर सोधेका छौँ ?
यो सानो कुरा, तर जान्ने सुन्नेलाई असाध्यै केटाकेटी कुरा लागिरहेको होला । तिनलाई मोदी र इमरान खानको चिन्ता छ, तर जन्मेर, हुर्केर, पढेर, बुढो भैसकेको आफ्नो टोलको चिन्ता छैन । क्यारेम बोर्डको क्विन टंकी हान्ने र स्नुकरमा स्नुक पार्ने टेन्सन छ तर बर्षौ देखि नपुरिएको सानो खाल्डोको मतलब छैन ।
ट्रम्प र किमको व्याख्या गर्न आउँछ तर त्यो किम भन्दा जरुरी बाटोको पोलमा रहेको चिम जलेको कम्प्लेन गर्ने फुर्सद र इन्ट्रेस्ट छैन । भनिन्छ, हरेक देशका जनताले आफ्नो हैसियत अनुसारको नेता पाउँछन रे । यदि यस्तो हो भने हामी जनताले पनि हाम्रो हैसियत बढाउनै पर्छ । हेर्ने कोही छैन भने टेर्ने कोही पनि हुँदैन ।
एउटा स्क्याभेटरले बाटो खनेर हेरेरै २–३ घण्टा बिताइदिने गरी छक्क परेर हुँदैन अब । आकाशे पुलमा २–३ घण्टा गाडी गुडेको, चरा उडेको, हेरेर बस्ने दिन गए । दुई वटा बाइक ठोकिएको देखेर रोकी–रोकी, मुन्टो तन्काई–तन्काई के भएको ? के भएको भनेर हुल बाँधेर ट्वाँ परिरहेर हुँदैन ।
परिर्वतन चाहिने हो भने परिवर्तित हुन पनि जान्नु पर्छ । तपाई र म ठीक भयौ भने राजनीतिज्ञलाई पनि ठीक पार्न सकिन्छ । नत्र हिजो हाम्रा हजुरबाको जीवन पनि नेतालाई गाली गर्दै बित्यो, बाले पनि जीवन भर नेतैलाई गाली गरे, तपाई र म पनि नेतैलाई गाली गर्नेछौँ, हाम्रा छोरा छोरी र तिनका पनि छोराछोरीले गर्ने त्यही गाली मात्र हुनेछ ।
सुधार चाहिन्छ भने सुध्रिआंै । नेताको मन त गैंडाको छाला जस्तौ भइसक्यो, कुनै गालिले नछेड्ने । साभार : न्युज24
विजयी र्‍यालीबाट फर्कदा दुर्घटनामा परी मृत्यु